‘कोञ्ज्योसोममा पुर्वाधारका काम धेरै भएका छन्’ « Lalitpur Khabar
दक्षिण ललितपुरको कोञ्ज्योसोम गाँउपालिका ८० प्रतिशत भन्दा धेरै जनसंख्या तामाङ्ग समुदायको बसोबास गर्ने गाँउपालिका हो । काठमाडौं उपत्यका बाहिर रहेको डाँडा पाखाहरुले ढाकिएको यो गाँउपालिका उर्भर खेती योग्य जमिन भएको गाँउपालिकाको रुपमा परिचत छ । पुर्नसंरचना भएको पहिलो स्थानीय निकायको कार्यकालमा कस्ता विकाश, निर्माण भए साथै कस्ता खाले चुनौती सामाना गर्नु प¥यो भन्ने सन्दर्भमा गाँउपालिकाका अध्यक्ष गोपिलाल सिङ्गतानसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ संवादको सम्पादित अंश :
चार वर्ष कार्यकाल पूरा भएको छ । के के काम भएका छन् ?
हामी सुरुमा आउदा कपी र कलम समेत थिएन । बस्ने ठाँउ समेत थिएन । न त स्थानीय सरकार संचालनका लागि कानून नै थियो । त्यो शुन्यको अवस्थाबाट हामीले काम गर्नु परेको थियो ।
हामीले धेरै कानून बनाएका छौं । भौतिक पुर्वाधारका काम पनि धेरै भएका छन् । गाँउ, टोल र बस्ती बस्तीमा सडक पु¥याएका छौं । अहिले हरेक टोलबाट १० मिनेट हिडेपछि सवारी साधन गुड्ने सडकसम्म पुग्ने अवस्था श्रृजना भएको छ । गाँउपालिका कार्यालयसम्म जाने ४० एमएमको कालोपत्र सडक सडक बनेको छ ।
गाँउपालिकाको पाँचै वटामा पर्यटकीय संरचना बनाउने क्रममा धार्मिक पर्यटन प्रर्बद्धनका लागि कामहरु भइरहेका छन् । गाँउ गौरवको आयोजनाको रुपमा कोञ्ज्योसोम प्रतिमा बन्दैछ । लिफ्ट प्रविधिको खानेपानी बन्दैछ ।
प्राचिन ऐतिहासिक साँस्कृतिक धरोहर गुप्तेश्वर गुफासम्म जानका लागि पौवाचौरदेखि गुप्तेश्वर गुफासम्म २ करोड ५० लाख रुपैया बजेटले ढुंगाको सिडि बाटो बन्दैछ । शंखुमा कृष्ण प्रणामी मन्दिर र छोरदेन गुम्वा बन्दैछ । दलचोकी मन्दिरको पुर्ननिर्माण हुँदैछ । दलचोकी भ्यूटावर बन्दैछ । पाथिभारा मन्दिर स्तरोन्नती हुँदैछ । सडक बनेको छ । चौघरेमा क्षत्रीयस्तरको रंगशाला बनाउदैछौं । ४ करोड ५० लाखमा गाँउपालिका भवन बनाइएको छ । छिट्दै हामी सरेर त्यसै भवनबाट सेवा दिदैछौं ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी वागमती प्रदेशमा १ नम्बरमा छौं । पशु तथा कृषिको प्रगतिमा हामी देशै भरिमा दोश्रो नम्बरमा छौं । भौतिक पुर्वाधारको प्रगतिमा हामी १ नम्बरमा रहेका छौं ।
०७७÷७८ सालको नीति तथा कार्यक्रममा १२ बषदेखि ५० वर्षसम्मका महिलाहरुलाई नि : शुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्दैछौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घरमै पुग्ने व्यवस्था गर्दैछौं ।
गाँउपालिकामा काम गर्न चुनौती कस्ता कस्ता रहेछन् ?
सुरु सुरुमा कर्मचारी नै नहुँदा काम गर्न कठिन भयो । जनप्रतिनिधिहरु भनेको विज्ञ होइनन् । जनप्रतिनिधिहरुले नीति निर्माण गर्ने हो । अनुगमन र नियमन गर्ने हो । काम गर्ने भनेको कर्मचारीले हो । कोञ्ज्योसोम गाँउपालिकामा मैले कर्मचारी राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ । कतिपय आवश्यक कर्मचारी गाँउपालिकाको गाँउसभाले निर्णय गरेर करारमा समेत राखेका छौं ।
कार्यान्वयन गर्ने सवालमा जनताले पनि नीति नियम पालन गरे सुशासन कायम हुन सक्ने रहेछ । कतिपय उपभोक्ता समितीले अपेक्षाभन्दा राम्रो काम पनि गरेका छन् । कतिपय काम ठेकेदारको भन्दा पनि गुणस्तरहीन बनेको छ । म चौविसै घण्टा खटेर काम गर्ने गाँउपालिकाको अध्यक्षको ठाँउमा त यस्तो छ भने देश भरि के होला ?
काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने वतावरण दिने चलन छैन । राम्रो काम गर्नेलाई साथ र समर्थन गरिदैन । मरेपछि मात्रै त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ । सालिक बनाइन्छ । मनले काम गर्नेलाई साथ दिने भए धेरै काम गर्न सकिन्छ । चुनौतीहरु धेरै छन् । संघ र प्रदेशले के काम गर्ने भन्ने स्प्रष्ट नहुँदा पनि समस्या बढेको छ ।
समयमै ऐन र कानून नबनाइदिदा समस्या बढेको छ । ऐन, कानून र कार्यविधिहरु बनाउदा स्थानीय तह हेरेर नबनाउदा पनि समस्या बढेको छ । एक रुपता छैन ।
स्थानीय राजनीतिकर्मीहरुले काम गर्न कति सघाएका छन् ?
मलाई गाँउपालिकामा प्रतिपक्षहरुबाट राजनीतिक हिसावबाट कुनै अवरोध छैन । म आफूलाई लाग्छ, मैले पुर्वाग्रह राखेर काम नगरेको कारण नै यो सहयोग मिलेको हो । मैले सबै पार्टीका राजनीतिककर्मीहरुलाई समन्वय गरेर काम गरेको छु । विकाश निर्माणमा पारदर्शी काम गरेको छु । जहाँ अपारदर्शी काम हुन्छ त्याँहा विरोध हुन्छ । सबैको अपनत्व हुने गरेर काम गर्नुपर्छ । काम गर्न खुला हुनुपर्छ । कोञ्ज्योसोममा विकाश निर्माणमा अवरोध र विरोध छैन ।
कर्मचारीहरुको सहयोग कति छ ?
मुख्य कुरा जनप्रतिनिधिहरु अभिभावकको भूमिकामा रहने हुँदा काम गर्ने वातावरण हामीले बनाउनु पर्छ । कर्मचारीलाई काम गर चनेर दवाव दिएर हुँदैन । गाँउपालिकाको अध्यक्ष भएको हैसियतले यो कुरा मैले बुझ्नु पर्छ भन्ने लाग्छ । मैले व्यवस्थापन गर्न जान्नु पर्छ र निर्देशन दिनुपर्छ । काम गर्नेलाई मैले प्रोत्साहन दिएको छु । सम्मान गरेको छु । तर काम नगर्नेहरुलाई कारवाही पनि गर्छु । त्यसैले कोञ्ज्योसोम गाँउपालिकामा काम गर्ने वातावरण छ । त्यही वातावरणका कारण कर्मचारीहरुले साथ पनि दिएका छन् । त्यही भएर म सफल भएको होला ।
कोञ्ज्योसोम पर्यटनको सम्भावना भएको क्षेत्र हो । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अहिलेसम्म काम चाही के के भएका छन् ?
कोञ्ज्योसोम गाँउपालिकालाई कृषि पर्यटनका लागि घोषणा गरेको गाँउपालिका हो । कोञ्ज्योसोम जाँदा सबै कुरा अर्गानिक पाउछ भन्ने जनमानसमा बनाउनु छ । म जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अघि गाँउपालिकाबाट दैनिक रुपमा ६ हजार दुध उत्पादन हुन्थ्यो भने अहिले दैनिक २० हजार लिटर दुध बजारमा विक्रि हुन यहाँबाट जान थालेको छ । दैनिक ४० हजार लिटर दुध शहर लगेर बेच्न सकिने अवस्था बनाउने मेरो भिजन छ । हाम्रो नारा कोञ्ज्योसोम जाँउ अर्गानिक खाउ भन्ने नारा छ ।
अघिल्लो वर्ष पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि हामीले कोञ्ज्योसोम पदयात्रा गरेका थियौं । सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरुदेखि पत्रकारहरु समेत सहभागी यस यात्राबाट पर्यटकीय गन्तव्यहरुमाथि धेरै बहस र प्रचार भएको थियो । तर कोरोना माहामारीले त्यसको निरञ्तरता दिन सकिएन । हामीले प्रशस्तै पर्यटकीय संरचना निर्माणमा लगानी गरेका छौं । यसको प्रतिफल पक्कै आउनेछ ।
दलचोकीबाट काठमाडौं उपत्यका सुन्दर देखिन्छ । यस ठाँउ स्वर्गजस्तो हुन्छ । दोश्रो दार्जलिङ्ग बनाउछु भन्ने योजना छ । तर समय पो छैन । हिजो केही नभएर काम गर्न सकिएन । आज सबै छ । तर समय छैन । कार्यकाल सकिन लाग्यो ।
कोरोना माहामारीसँग कोञ्ज्योसोम गाँउपालिकाले कसरी लडाई लड्यो ?
कोरोना भाइरससँगको लडाईमा यो गाँउपालिका अग्रपंतीमा थियो । हामीले राम्रोसँग सृजकता अपनायौं जनप्रतिनिधि र कर्मचारी खटेर कोरोनाबाट यस गाँउपालिकालाई जोगाउन सफल भयौं । कोरोनाका कारण यहाँ कसैको पनि अकालमा मृत्यु भएन । कोञ्ज्योसोम जना व्यक्तिको मृत्यु भयो । तर बाहिर बस्ने व्यक्तिको मात्रै । अध्यक्ष फोरम गठन गरेर हामीले अन्य गाँउपालिकासँग समन्वय गरेका थियौं । लकडाउन,निषेधाज्ञा गरेको अन्य गाउपालिकामा पनि एक रुपता ल्याउका थियौं ।
कृषिमा क्षेत्रमा काम के कस्ता भएका छन् ?
कृषिमा पकेटको कार्यक्रम ल्याएका छौं । शंखुलाई भैसी पकेट क्षेत्र घोषणा गरेका छौं । यहाँ ललितपुरको सबैभन्दा धेरै दुध उत्पादन हुन्छ । वडा नं. ३ लाई बाख्रा पकेट क्षेत्र घोषणा गरेका छौं । वडा नम्बर ४ लाई गोलभेडा, ५ र १ लाई अन्य तरकारी पकेट क्षेत्र घोषणा गरेका छौं । यसरी कृषी कार्यक्रमहरु ल्याएर नमूना काम गरेका छौं ।
विदेशमा पलायन भएका युवाहरुलाई आफ्नै गाँउमा स्वरोजगार हुन हामीले बैंकहरुसँग विना धितो ऋण दिलाउने पहल भइरहेको छ । त्यसको नियमन र कार्यान्वयन हुने गरि कार्यविधि बन्दैछ । सम्झौता गर्दैछौं । त्यसपछि स्थानीय उत्पादन बढ्नेछ ।
कर नीति कस्तो लिनु भएको छ ?
कर को विषयमा राज्यले नै आलोचनाको विषय बनाइ दिएको छ । जनतालाई सरकारले कर लिएर लुट्यो भन्ने परेको छ । त्यो लुटेको होइन सिस्टम बसालेको हो । व्यावसायीहरुले कर तिर्नुपर्छ । जनतालाई त कर लिएकै छैन । कृषकलाई कर लिएको छ र ? फलफुल बेच्नेलाई कर लिएको छैन । जनतालाई कर लिएको मालपोत रु घटना दर्तालगायतको सामान्य कर हो । तर अस्वभाविक प्रचार भएको छ ।
कोञ्ज्योम गाँउपालिका स्थानीय श्रोत र साधन नभएको ठाँउ हो । ढुंगा खानीको प्रशस्त सम्भावना भएको ठाँउ हो । तर प्रदेश र केन्द्रले अंकुश लगाइदिएको छ । स्थानीय पर्यटन क्षेत्रमा पार्किङ्ग,पर्यटन शुल्क भनेको छ । भएको ठाँउ सबै बन जंगल । बनलाई बन ऐनले छुनै दिदैन । के पर्यटन क्षेत्र बढाउनु ?
पर्यटकीय क्षेत्र विकाशका लागि पार्किङ्ग, धार्मिक संरचना र पिकनिक स्थलहरु आदि बनाउन सरकारले स्थानीय सरकारलाई केही जमिन दिनु जरुरी छ ।
स्थानीय सरकारले अधिकार पाएन भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो, संविधानले दिएको अधिकार मन्त्रीस्तरको निर्णय सचिव स्तरको निर्णयको पत्रले रोकिरहेको छ । अंकुस लगाइदिएको छ । त्यो स्थानीय सरकारलाई क्षेत्रअधिकार दिइएको छ । ती सबै अधिाकार कार्यान्वयन गर्न दिएको छैन ।
अर्को कार्याकाल दोहो¥याउने अवस्था आए के गर्नुहुन्छ ?
दोश्रो पल्ट कार्यकाल दोहो¥याउने भन्ने मेरो बशको कुरा होइन । सबैको साथ पाए अहिले अधुरो भएको कामहरु पुरा गर्ने योजना छ । बनेका सडकहरु कालोपत्र गर्ने स्तरोन्नती गर्न बाँकी छ । बनेका संरचनालाई संरक्षण गर्ने, आर्थिक समृद्धिमा जनतालाई जोड्दै लैजाने मेरो योजना छ ।
चाहेर पनि गर्न नसकेको योजना के छ ?
मैले चाहेर पनि गर्न नसकेको योजना लेले चन्दनपुर मोटर बाटो हो । यो दुई लेन कालोपत्र गर्न गाउपालिकासँग पैसा छैन । डिपिआर बनायौं । तर स्तरोन्ती गर्न सकेनौं । स्थानीय निकायले गर्न नसकेको यो काम केन्द्र गर्नु पर्ने हो । मन्त्रीहरुले बजेटलाई आफ्नो खल्तीको पैसा जस्तो गरेकाले यो सडक बनेन ।
यो बाहेक कोञ्ज्योसोम माहाकाल जोड्ने मध्यमार्गी सडक,गोदावरी कोञ्ज्योसोम, माहाकाल र वागमती जोड्ने दक्षिण ललितपुरको रिङ्गरोड हामीले चाहेर पनि गर्न नसक्ने योजना हुन् ।
गाँउपालिकाले गाँउ गौरव योजना अन्र्तगत कोञ्ज्योसोम प्रतिमा निर्माणको योजना अघि सारेको छ । यसका लागि १५ करोड रुपैया चाहिन्छ । ४ बर्षको अवधिमा लडाई लड्दा लड्दा यो आर्थिक वर्षमा संस्कृती तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट साझेदारी विकाश कार्यक्रमबाट ३ करोड ५० लाख रुपैया बजेट परेको छ । यो बौद्ध धर्मका लागि पहिलोपल्ट राज्यले लगानी गरेको संरचना हो । गाँउपालिकाले एक करोड पचास लाख रुपैया लगानी गरेको छ । यस्ता ठूला योजनाहरु हामी गर्नै नसक्ने भए पछि जनप्रतिनिधि हुनुको के अर्थ ? जनप्रतिनिधि भनिएको हुन्छ ठुला ठुला भाषा प्रयोग हुन्छ । तर काम गर्न सकिदैन ।
प्रदेशमा १० प्रतिशत पैसा खर्च हुदैन । यस्ता ठूला योजनामा उनीहरुले लगानी गर्नु पदैन ? ५ करोड भन्दामाथिको बजेट प्रदेश सरकारले कायान्वयन गर्ने भन्ने नीति बनाउनु पर्छ ।